यो साता चम्किलो छ यी ६ राशिको भाग्य, कुन हो तपाईको राशि ?
Highlight धर्म दर्शन
March 22, 2019 March 22, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on यो साता चम्किलो छ यी ६ राशिको भाग्य, कुन हो तपाईको राशि ?
यी ६ राशिका लागि यो साता अति शुभ छ। धन आर्जन, परिवार भेट, प्रेममा सफलता आउने यो साताको योग रहेको छ। यो साता राम्रो ग्रहफल भएका ६ राशिहरु यसप्रकार रहेका छन्।
मिथुन : साता उत्साहप्रद तथा विभिन्न खाले मनोरञ्जनले बित्नेछ । धार्मिक भ्रमण गर्दा प्रेमिकाले नौलो धातु उपहार प्रदान गर्न सक्छिन् । योजनाबिना साथीसँग नयाँ स्थानको भ्रमण गर्दै मिष्ठान्न भोजनको रसापान लिइनेछ । पुख्र्यौली धन खर्च गरी सवारी साधन खरिद गर्नै मत मिल्नेछ ।
आजको राशिफल हेर्नुभयो यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस
सिंह : यो साता पूर्वतर्फको यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ । कार्य व्यस्तताका कारण घरपरिवारमा खटपट हुन सक्छ, जसलाई निर्मूल गर्न घरपरिवारमा समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ । मन पराउने तथा प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरूसँग सचेत रहनु नै आफ्नो हितमा हुनेछ । मंगलबारपछिका दिनहरूमा पूण्य आर्जन गर्न आस्था बढ्नेछ ।
तुला : मेहनत, कर्मठ, लगनशीलताले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ । मित्रहरूले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछन्, धैर्य भई कार्य गरेमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै पुरस्कार उपहार प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । धार्मिक यात्रामा जाँदा विशिष्ट व्यक्तिसँग भलाकुसारी हुनेछ ।
वृश्चिक : सहपाठी मित्रहरूबीच कार्यगत एकता भै नयाँ कार्यको श्रीगणेश गरिनेछ । आकर्षक रोजगारी हात लाग्दा साथीभाइबीच चर्चित भइनेछ । ठूलो लगानी गरी व्यवसाय प्रारम्भ गर्दा विदेश यात्राको मौका जुर्नेछ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हँुदा विवेक पु¥याउनुपर्नेछ । घरायसी सजावटमा नवनिर्मित सामग्री खरिद गरी अरूको प्रशंशा बटुल्न सकिनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् यी ५ राशिका लागि निकै उत्तम छ आजको दिन, हेर्नुहोस् बिहीबार राशिफल
मकर : आध्यात्मिक चिन्तनले समाजसेवातर्फ अभिप्रेरणा जगाउन सक्छ । पहिलेका कमजोरीहरू सच्याउँदै बिग्रिएको सम्बन्ध पुनः सुमधुर बनाउन सकिनेछ ।अध्ययन अध्यापनमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ । काम देखाएर धेरैको प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै विशेष कामको जग बसाउन सकिनेछ । व्यावसायले विदेशयात्राको अवसर जुटाउन सक्छ ।
कुम्भ : तपाईंको निर्णय क्षमताले विभिन्न अवसरको ढोका खोल्नेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सफलाको इनाम प्राप्त हुनेछ । आवेशबाट गरिएका कार्यले परिणामको नजिक पुग्न कठिन हुनेछ । पहेंलो रंग प्रयोग गर्नाले शुभ संकेत प्राप्त भै पश्चिमतर्फको यात्रा लाभदायक देखिन्छ ।
कपिलबस्तुको शिवराजमा भएको आगलागी ११ घर जलेर नष्ट
कोरियन भाषा परीक्षा : एकै दिनमा ५० हजारले भरे आवेदन
प्रहरीको इन्काउन्टरमा सप्तरीका जैसवालको मृत्यु, को हुन जैसवाल ?
January 23, 2019 January 23, 2019 अखवार अनलाइन
तपाइका लागि आजको दिन कस्तो छ हेुर्नहोस आजको राशिफल (२०७५ चैत्र ४ गते सोमबार)
March 18, 2019 March 18, 2019 अखवार अनलाइन
नौ हजार एउटा मोवाइलको लोभमा ढुंगाले हानेर साथीको हत्या
May 22, 2019 May 22, 2019 अखवार अनलाइन
गायिका सरस्वती लामा विरुद्ध काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर
May 21, 2019 June 7, 2019 अखवार अनलाइन
प्रहरी प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रपतिको निवासमा गाभ्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले लुकायो विवेकशील नेपाली
March 19, 2019 अखवार अनलाइन
आजको भाग्य थाहा पाउनुहोस राशिफल हेरेर (२०७५ माघ २२ गते मंगलबार)
February 5, 2019 अखवार अनलाइन
आफु फिट रहन केकी अधिकारी को यस्तो टिप्स ,जुम्बा र योग आलोपालो गर्दै
फरार भनिएका वडाध्यक्ष लुइटेलको आयो बुलन्द आवाज, ‘भष्ट्रचारीलाई कालोमोसो दलेरै छाड्छु’
विसं २०७६ साउन ६ गते सोमबारको राशिफल
बाढी पहिरोमा परी गुल्मीमा ६ जनको मृत्यु
अफगानिस्तानमा अमेरिकी हवाई आक्रमणमा एकै परिवारका १३ जनाको मृत्यु
‘मेरो चरित्र हत्या गर्ने काम गरियो’ वडाध्यक्ष अजय लुइटेल (भिडियो सहित)
फरफारक संगै भत्कीयो खेलमैदानको पर्खाल
शैक्षिक छात्रवृत्ति स्थापनाका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंकको सहयोग
अर्पण पेट्रोल पम्पले हाल्यो तेल भन्दै पानी